Uphiko we ukuchuma ngokwezimali noma kanjani ukufunda ukuze ulondoloze.
inkululeko lwezezimali kule impilo beckons cishe bezgranichnymivozmozhnostyami yayo ngamunye. Thola kusuka ekuphileni, ukukhokha izikweletu nje ithikithi amabhange kazwelonke, kungcono kakhulu. Kodwa indlela kule mgomo unzima futhi lyubomudostupen futhi posilen.
Kasibili ngikuhlosa ukuze kufinyelelwe lo mgomo, kuba nxa usufike ekuseni incwadi yocingo. Futhi uthi yakho isihlobo, abathuthela e-1917 eRussia kuya e-Argentina, ufile. Ifa kwesokunxele esiqhingini endaweni ethile ePacific Ocean, kubuye ambalwa amaRandi ayisigidi, futhi uwena owalandela ngqo eyodwa kuphela. Nakuba "okunamathelayo" iskripthi okwesikhathi Hollywood ifilimu pop. Ezimpilweni zethu, konke prosaic okuningi.
Empilweni yesimanje, kumelwe ufunde ukuze ulondoloze. Kudingeka siziqonde engabizi futhi ukunciphisa zonke ngokuphelele zonke izindleko. Yiziphi izinsiza ngabe ungazange waqala kokulondoloza, umgomo oyinhloko we ekulondolozeni usazoba iphepha amabhange kazwelonke njengoba cishe kuphela okulingana Inani impahla.
Indlela ukusindisa imali?
Imigomo ukonga imali esetshenziswa emuva kakhulu ezweni lasendulo. Eyaziwa njenge "ngemifanekiso yaseBabiloni", indatshana wayetshela mayelana nemithetho eyisisekelo ukonga imali ku Polis abacebe IBhabhiloni lasendulo. I oyisisekelo wokonga imali kwaba ukulondoloza, ukuhlehliswa of imali etholwe ngokuthi izabelo for ukutshalwa okwalandela ebhizinisini elingenisa imali.
Kuleli zwe lanamuhla isimiso ukonga imali kusekelwe postulates eminingi yasendulo. Kodwa savela. impucuko yethu, umshini ukusetshenziswa yesimanje ilungiselelwe kukhishwe ezezimali ngangokunokwenzeka. Ngaphezu kwalokho, kule indlela, zonke, Nokho abopha amadigri ahlukahlukene.
Modern imali ekulondolozeni kusekelwe ezinye zezimiso eziyisisekelo.
Izindlela zokonga imali
Ukuhlehlisa lweshumi engenayo Imininingwane nyanga idiphozi akhawunti emabhange. Into esemqoka ukuthi idiphozi kufanele kube vpolzovanii elula isiqinisekiso okusheshayo cash ukuhoxiswa banknotes ngaphandle lapho ulahlekelwe okuthile okuyigugu nesithakazelo engenayo. Thola uqobo njalo kungenzeka kunoma yiziphi CIS esifundeni.
Labo abasele abanga-amaphesenti ayisishiyagalolunye imali kufanele isetshenziswe ngobuchule. Kudingekile futhi kusukela kule ingxenye yale mali ukumpintsha out ngangokunokwenzeka svobodnyhsredstv. Njengoba umkhuba imibukiso, ukuba komholo ojwayelekile, Customs Soyuzaeto ngempela ngempela. Nokho kubalulekile ukubonisa ukubekezela nokuzinikela. Udinga nje bafunde ukonga imali.
Into yokuqala kufanele wenze baqale ukuqhuba izifundo zokubala. Vezani ezimali egcwele ukuhamba izimali. Lungisa yonke ezifundeni kanye raskhody.Prichem hhayi nje izinombolo, okungukuthi imigqa isabelomali, okungukuthi, Izincazelo, futhi kungakanani sasetshenziswa. Kute lendlela kokubili software ezikhethekile futhi ngesandla Excel spreadsheet. Ngenyanga yokuqala kuyanisindisa kuphela ukubhala konke phansi. Ngokulandelayo, ahlaziye futhi uthole amabhajethi ususuthi futhi okungadingekile.
Izinkokhelo ze efulethini. Ngiphakathi umninindlu odinekonomny ngeke ngizivumele ukuba uthele amanzi ngokungadingekile, okugcina izibani zikhanya, ukuchitha extra ukushisa amandla. Uma uthi nhlá, kulezi izinkokhelo kungase kubonakale penny, kodwa mncane futhi akusho ukumisa zangena cash flow ekhukhwini lakho! Believe me, uma wengeza up zonke lezi ukuvuza, umphumela ngeke luningi emfuleni izindleko ezingenasidingo. Futhi-ke kufanele ukwakha idamu. Ekuqaleni kungase metering kumadivayisi we ukushisa kanye nogesi, imitha yamanzi, eyonga ugesi amalambu nemishini, mbumbulu ngci, eliphezulu iwindi kanye nomnyango izinhlelo.
Iphuzu olandelayo ungalilahli ukunganakwa uhlelo izaphulelo ezinkulu kanye yokuthengisa. Isigamu emhlabeni othenga futhi isebenzisa yokuthengisa izaphulelo. Ngithathe alikhulumi kokuchitha ezimpahleni ezishibhile. Cha Iphuzu isizini futhi isitoreji iklayenti izaphulelo. Lesi yisinyathelo ngqo ukonga imali. Ukuthenga uhambo kuya Maldives noma entsha mink elingenamikhono, ekuqaleni ikubuza mayelana izaphulelo kungenzeka ku iziphakamiso efanayo evela kwamanye opharetha.
Isici esibalulekile ukonga imali ukuqeda imikhuba emibi. Ezinjalo njengoba nicotine kanye notshwala. Mayelana izidakamizwa libe nzima ngokwengeziwe, angisho kufanele behlukene umphakathi kanye qha kwenela. Usanda kufanele ukubala malini ubhema ngenyanga, ngonyaka, eminyakeni emihlanu. Futhi malini ngibhema iminyaka 10-20? Ezokulungisa efulethini, noma okungenani ukuhlala Thailand?
vampredstoitizbavitsya Landelayo izikweletu nokubonga. Lena imali yangempela Washout, okuholela wokugoqa. Kuyinto edabukisayo ukuthi isikweleti sendlu ngabe bayehluleka ngekwetimali futhi ngokushesha bandla them behluleka. Kuyadingeka ukuba iyakwenqabela okwamanje ukuboleka. Kufanele uthole esezisetshenzisiwe ezihlala zodwa, ethile. Udinga ukumisa nibolekisa ngaphandle kwenzalo wathola Ngezimali besithathu. Lena akuyona ubani akudingeki samorityanstvo uxhuma imisebenzi yakho yezimali nokuphatha imali. Akukona ukugxila ukulungiswa isabelomali abanekhono futhi kunembile.
Le mithetho elula kuzosiza wonge imali ayisekho bazibuze ukuthi ukufunda ukuba bonge imali. Siza ufika cobble ndawonye izimali, okuyinto ungakwazi uqale ukutshala imali. Nokho, kufanele ukhumbule njalo mayelana umnotho kanye nokusetshenziswa okunengqondo izimali. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukufunda ukuze ulondoloze imali indaba esemqoka.
Izindlela ezahlukene kanjani ukuze uthumele imali kusuka efonini efonini
"Ngiyabonga kusukela Savings Bank." Indlela ukuchitha futhi buthelela amabhonasi?
Inkukhu nge imifino multivarka - isidlo onothile wonke umndeni!
Ngithenge aerogrill ozithandayo? Izibuyekezo kanye Izincomo
Izinwele Split: futhi zivikele